बढ्दो उमेरमा कसरी जवान देखिने ? यी हुन् प्राकृतिक काइदा – onlinedarpan:
Posted on November 21, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 99 Views
बल, बैंश र सौन्दर्य सधै एकनास रहँदैन । जीवन जति-जति छोटो हुँदै जान्छ, यी कुरा पनि क्रमस खिइदै जान्छ । शिथिल हुँदै जान्छ । अनि बुढ्यौलीले छोप्छ । बल सकिन्छ । बैंश रित्तिन्छ । सौन्दर्य निखि्रन्छ । साथसाथै हाम्रो अनुहारको चमक, ओज हराउँछ ।
मान्छेको मनोविज्ञान के हुन्छ भने, आफुलाई सधै जवान देखाउने । सधै आकर्षक देखाउने । जबकी उमेर ढल्कदै गएपछि प्राकृतिक रुपमै यी कुराहरु हामीबाट टाढा हुन्छ । हामी जवान रहँदैनौ । आकर्षक देखिदैनौ ।
तर, यसमा उमेर मात्र पनि कारक छैन । अर्थात उमेरले मात्रै पनि मानिसको वैंश, सौन्दर्य खिइने होइन । यदी सही ढंगको जीवनयापन र खानपान गर्ने हो भने यसको अवधी अरु लम्बाउन सकिन्छ । उमेरले पाको भएपनि शारीरिक हिसाबले जवान, तन्दुरुस्त, बलियो र आकर्षक रहन सकिन्छ ।
तर, हामी जवान, तन्दुरुस्त रहनका लागि आवश्यक सावधानी अपनाउने गर्दैनौं । नतिजा, उमेर भन्दा चाडै बुढो देखिन्छौं । उमेर नपुग्दै पाको देखिन्छौं । छाला रुखो हुन थाल्छ । दागहरु देखिन थाल्छ । चाहुरिन थाल्छ ।
सौन्दर्य प्रसाधनको भर
त्यसो त अहिले उमेर ढल्किएसँगै एन्टि एजिङ क्रिम लगाउने चलन छ । यस्ता थुप्रै सौन्दर्य प्रसाधन पाइन्छ, जसले अनुहारको दाग, चाहुरी लुकाउन मिल्छ । विभिन्न उपचार विधीबाट पनि बुढ्यौलीले छोप्दै गएको छालामा चमक ल्याउने यत्न गरिन्छ । जबकी यी कृतिम प्रयासहरुले क्षणभरको लागि हाम्रो बुढोपन ढाकछोप गर्न सक्छ । दीर्घकालिन होइन ।
त्यसैले यसका लागि प्राकृतिक विधी अपनाउनु सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । के होला त प्राकृतिक विधी ?
नियमित व्यायाम गर्नु शरीरको शक्ति र कार्यक्षमतालाई बढाउँछ । यसले तपाईंको छाला पनि धेरै कसिलो हुन्छ । नियमित व्यायाम नगर्ने र असन्तुलित जीवनशैली अपनाउनाले तपाईंको शरीरको कार्यप्रणाली ढिलो हुन्छ । यसको असर उमेर धेरै देखिने रुपमा अगाडि आउन थाल्छ ।
यदि तपाईं भरपुर निदाउनुहुन्छ भन उमेरको असरलाई टाढा राख्न धेरै मद्धत मिल्छ । तपाईं राम्रो दिनमा कम्तीमा ६-८ घन्टा निदाउनुहुन्छ भने तपाईंको समग्र स्वास्थ्य पनि राम्रो रहन्छ । कोसिस गर्नुहोस् कि तपाईंको सुत्ने र उठ्ने समय एकजस्तै होस् ।
धुम्रपानले शरीरमा उमेरको असर छिटै देखिन लाग्छ । धुम्रपानले शरीरमा धेरै नराम्रो असर गर्छ र यहि लक्षण तपाईंको अनुहारमा पनि देखिन थाल्छ । तपाईंको छाला चुरोटबाट निस्कने धुँवाको सम्पर्कमा आउँछ भने त्यसले धेरै नोक्सान गर्छ ।
Share25TweetGoogle+Pin025sharesश्रीमान श्रीमतीले अनिवार्य पढ्नुस ! नपढे जीवनभर पछुतो हुनेछ ! सम्पुर्ण श्रीमान श्रीमतीमा समर्पित एकपटक अवश्य पढ्नु होला। एक दिन छोराले अाफ्नो पितासँग गुनासो गर्छन। छोरा := बुबा म मेरी पत्नीसँग अब सगै बस्न सक्दिन। बुबा:= किन छोरा, के भयो एक्कासि? छोरा := उनी धेरै बदलिएकी छिन। न मसँग राम्ररी कुरा गर्छिन। न मैले सोधेको विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…